Ahoana ny fandoroana sary amin'ny Ubuntu | Ubunlog
Ahoana ny fandoroana sary amin'ny Ubuntu
Na dia tsy azo ihodivirana aza isika mankany amin'ny ho avy izay hipetrahana ao anaty rahona ny fampahalalana rehetra, na dia androany aza dia mety hahaliana ihany ny mitahiry angona sasany amin'ny haino aman-jery ara-batana toy ny kapila matevina. Ny serivisy fampiantranoana mora vidy dia mahomby Ny fampiasam-bola amin'ny haino aman-jery ara-batana dia lasa tsy dia misy dikany intsony, izay marefo ary tsy manome antoka mitovy amin'ny fisian'ny fotoana misy an'ireo.
Amin'ity toro-lalana ity dia manazava ny fomba fandorana ny sary amin'ny kapila na fahatsiarovana USB avy amin'ny rafitra fiasa Ubuntu izahay. Andao hanomboka.
1 1. Hamarino ny fahamendrehan'ny sarinao
2 2. Handoro ny sary amin'ny kapila matevina
3 3. Dory amin'ny pendrive ilay sary
1. Hamarino ny fahamendrehan'ny sarinao
Olana ny kolikoly amin'ny angona misy fiatraikany manokana amin'ireo rakitra alaina amin'ny Internet ary mahamenatra ny mandany rakikira noho io antony io. Mba hanamarinana ny fahamendrehan'ny sary izay hodoranay, dia hanohy hanatanteraka, alohan'ny fandraisam-peo, ny fanamarinana azy.
Mba hanatanterahana ny fanamarinana dia hasehonay anao ny baiko roa mifototra amin'ny famintinana nomerika samihafa (MD5 sy SHA256) izay valiny dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny iray omena na iza na iza manome anao ny sary (amin'ny ankapobeny dia hita ao amin'ny tranokala izay sintominao). Na dia tsy misy foana aza io fampahalalana io dia tsara ny mampitaha azy ireo isaky ny azo atao.
Raha tsy maneho hevitra momba ny tsy fitovizan'ny algorithma famintinana nomerika samihafa, amin'ny fampiharana dia afaka mampiasa mazava tsara ny iray na ny iray isika satria izy roa Hanolotra antsika izy ireo fiarovana ampy hanamarinana ny tsy fivadihana marina avy amin'ny fisie sary:
Amin'ireo tranga roa ireo ny valiny azo dia kofehy an-tsoratra alphanumeric miaraka amin'ny famintinana ny sary izay ny sandany dia tsy maintsy mifanaraka amin'ilay voalaza Aza manahy ny maka tahaka azy manontolo, satria ny fanovana kely indrindra (iray monja) dia hahatonga ny famintinana azo hafa tanteraka. Ao amin'ny Ity rohy ity Azonao atao ny manamarina ny fihenan'ny sary samihafa amin'ny fizarana mifototra amin'ny Ubuntu.
2. Handoro ny sary amin'ny kapila matevina
Tsy toy ny tahirin-kevitra mahazatra izay voatahiry ao anaty solosaina, ny rakitra sary tsy azo ariana mivantana ao anaty kapila. Mila voarakitra an-tsoratra amin'ny alàlan'ny programa manokana manitatra / mamoaka ny atiny amin'ny media iray izy ary mamaky azy amin'ny alàlan'ny solosaina. Mba hanatanterahana an'ity dingana ity dia hametaka kapila banga manana fahaiza-manao ampy hahitana ny angona sary izahay ary hikitika ny bokotra ankavanan'ny totozy amin'ny rakitra ary hisafidy ny safidy izay manondro Doro-kapila ...
Manoro hevitra anao izahay hampiasa kapila fanoratana irery, raha azo atao, satria izy ireo no safidy mora vidy indrindra amin'ny fitahirizana ny mombamomba anao amin'ity haino aman-jery ity.
3. Dory amin'ny pendrive ilay sary
Ary farany, raha tianao ny manoratra ny sary amin'ny pendrive azonao ampiasaina indray araka izay tadiavinao, Tsy maintsy manatanteraka ity baiko manaraka ity izahay izay asehonay:
Raha tsy fantatrao ny lalan'ny fahatsiarovanao USB dia azonao atao ny mampiasa ity baiko manaraka ity mba lisitra ireo kapila misy eo amin'ny rafitry ny rafitrao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Ahoana ny fandoroana sary amin'ny Ubuntu
danaskaly dia hoy izy:
Salama! Misy rindranasa ao amin'ny ubuntu mate 16.04 lts azoko alaina ao amin'ny ivon-toeran'ny rindrambaiko handraketana iso (ubuntu isos) mankany amin'ny usb? Misaotra betsaka amin'ny fanampiana !!
Mamaly an'i danaskaly
Notsidihiko ny 16.04-bit ubuntu 32 ISO (ubuntu-16.04.1-desktop-i386.iso), nandoro kapila misy ilay sary miaraka amin'ilay brazier ihany koa aho ary tsy misy fomba azo amboarina amin'ny cd, izany dia izaho ampidiro ny dvd raha vao voarakitra ny sary dia esorina ny rakitra rehetra fa tsy azo alefa rehefa manomboka ny solosaina. Mifanohitra amin'izany, fotoana vitsy lasa izay dia nampidina ny ubuntu 16.04 64-bit aho ary tsy nanana olana. Misy hevitra inona no mety hitranga?
Hanjavona ao amin'ny Ubuntu 16.04 LTS ny Software Center